संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारीः संसदका कुर्सी खाली | Kantipath.com
संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारीः संसदका कुर्सी खाली
काठमाडौ । सङ्घीय संसदमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आज पनि जारी छ ।
छलफलमा भाग लिएका सत्ता पक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गरेका छन् भने विपक्षी दलका सांसदहरुले भने नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्दै आफ्नो भनाई राखिरहेका छन् । छलफलमा भाग लिंदै नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका नाममा नागरिकलाई झुक्याइरहेको बताउनुभयो ।
खर्च घटाउनु भन्दा सरकार दीर्घकालिन खर्च बढाउने कार्यक्रम थप गर्नमा मात्रै लागेको नेता थापाको आरोप छ । नेता थापाले भन्नुभयो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कहि नीति छ कार्यक्रम छैन, कहि कार्यक्रम छ नीति छैन ।’
नीति तथा कार्यक्रम अलमलिएको निबन्ध जस्तो मात्रै भएको नेता थापाको टिप्पणी छ । थापाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा फेर्न सरकारलाई सुझाव दिंदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली होइन, समृद्ध दमक, सुखी केपी ओली भन्ने नारा लगाओस् ।’
नेकपाका नेता विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षलाइ सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाइ पूरा गर्ने गरि आधार बर्षको रुपमा तयार पारेको तथा आगामी वर्षलाइ इतिहासकै तिब्र आर्थिक विकासको वर्षको रुपमा बिकास गर्न खोजेको र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो ।
आर्थिक बृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुर्याउने, समृद्धीका लागि योगदान पु¥याउने क्षेत्रगत बिषयलाई पनि अगाडी सारेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै नेता पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयलाई पनि प्रथामिकतामा राखेकाले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको दाबी गर्नुभयो । अर्को प्रसंगमा नेता पौडेलले ललिता निवासको जग्गाका विषयमा छानबिन गरि दोषीलाई कडा कारबाही होस् भन्ने चाहेको बताउनुभयो ।
आफु दोषी भएमा आफु जुन सुकै दण्ड भोग्न तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । छलफलमा भाग लिंदै सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले चिनौं आफ्नो माटो, बनाउँ आफ्नो देश भन्ने नाराले कति वर्षमा नेपाल कहाँ पुर्याउने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने भन्दै यसमा कसैले बिरोध गर्नु नपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
२०७९ सालसम्म विकासशिल देशमा पुग्ने र २०८७ सालसम्म दिगो विकास हाँसिल गरिसक्ने र वि.सं. २१ सयसम्ममा समृद्ध मुलुक बनाउने सोच कहाँ नराम्रो छ ? भन्दै पाण्डेले प्रतिपक्षिलाई प्रश्न गर्नुभयो । बारीका पाटा खेतका गह्रा, हुन्छन् हराभरा भन्ने नाराले कृषि र उत्पादनलाई जोड दिएको भन्दै उहाँले यो देशको खानी र पानीलाई उपयोग गरे देश समृद्ध हुने भएकाले यसमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
काँग्रेस सांसद चित्रलेखा यादबले नीति तथा कार्यक्रम छरिएर आएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो नहुने बताउनुभयो । यस अगाडीका नीति तथा कार्यक्रम नै पूरा हुन नसकेको समयमा आएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भन्दा पनि नियतमा खोट रहेको नेता यादवको तर्क थियो ।
यस्तै, काँग्रेस सांसद मीना पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम होइन सरकारले सम्बोधन मात्रै गरेको बताउदै प्रतिपक्षिसँग कुनै छलफल नगरि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो नआएको बताउनुभयो ।
सांसदहरुले अहिले पनि पालै, पालो आफ्नो बिचार राखिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम माथिको महत्वपूर्ण छलफलका क्रममा संसदका कुर्सीहरु भने खाली देखिएका छन् । सांसदहरु आफ्नो विचार राख्दै बाहिरिदै गरेकाले पनि संसदभित्र बस्ने सांसदहरु कम रहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल भोलिसम्म चल्नेछ ।
Previous Previous post: श्रीमती धेरै सुन्दरी भएपछि श्रीमानलाई यस्तो आपत्
Next Next post: गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकतामा राष्ट्रपतिको जोड